अहिले यतिबेला सामाजिक संजाल मा तिर्सना बुढाथोकी निकै नै चर्चामा आएकी छन । उनले नेपाल को झन्डा को अपमान गर्दै भिडियो समाजिक संजाल मा पोस्ट गरेकी छिन । यस्तै समाजसेबि ज्वाला संग्रौला ले पनि तिर्सना बुढाथोकी बारे आफ्नो प्फेसबुक मा लेखेकी छिन । हेर्नुहोस उनले लेखेको फेसबुक स्टाटस जस्ताको तेस्तै:-
मेरो म्यासेन्जरको जबाफ दिनबाट डराएर लाईभमा आएर समाजसेविका भन्दै भुक्ने छाडा तिर्सना बुढाथोकी, तिमीलाई मेरो सीधा च्यालेन्ज छ नामसहित लाईंभ आउ किन डराउँछौ? म समाजसेवी हैन तिमीजस्तो छाडालाई किस्ता किस्तामा तह लगाउन जन्मिएको मान्छे हुँ! केटी मान्छेलाई म सम्मान गर्छु तर तिमीजस्ता समाज भँडुई बेसरम
छाडा आईमाईलाई सम्मान हैन भेंटें भने सुधार गृहमा लगेर समेत कोचिदिन्छु । हेक्का राख छाडा तिर्सना, म गरिब दुखीहरुको आवाज बोलेर समाजमा चिनिएकी महिला हुँ तिमीले जस्तो उग्र अस्लिल हर्कतमा उत्रिएर आफ्नै नेपाली दाजु भाईहरुलाई माईतिहरुलाई तिघ्रा र स्तन देखाएर समर्थक फ्यान फलोअर्स कमाएको हैन !
र मेरा सपोर्टहरु मेरा मित्रहरु तिम्रो जस्तो थोत्रो शरिर हेर्न भेला भएका बोकाहरु जस्ता छैनन, बिचार पढ्न र देशको बारेमा चिन्तन मनन गर्न भेला भएका बौदिकहरुको जमात छ वरिपरि बुझ्यौ ? अमेरिकामा बसेर नेपाली हरुको मानमर्दन गर्ने छाडा तिर्सना, तिमी कुन एङ्गलबाट कलाकार देखिन्छौ ? हामीले पनि कलाकार धेरै देखेका छौं ।
तिमीलाई त मैले क़सम चिनेको पनि थिएन तर जसरी मेरो देशको झण्डा तिम्रो नाँगो शरिरमा बेरिएर निरिह भएर संजालमा आयो , त्यसपछि यो छाडा केटी को रहेछ त भनेर सोधखोज गर्दा नाम तिर्सना बुझाथोकी र काम अंग प्रदर्शन भनेर साथीहरुले तिम्रो पोर्ट फोलियो बताए ! त्यसपछि मैले थोरै तिम्रो बिगत अध्ययन गर्दा तिमी
सामाजिक अनुसासन र मर्यादाको दाम्लो चुँडाएर हिँडेकी महिला रहेछौ भन्ने कुरा थाहा पाएँ ! तसर्थ सुन छाडा तिर्सना , मेरो देशको झण्डाले तिम्रा गोप्य अंग ढाकेर अरुलाई थर्काए जस्तो हैन , सिधै मसँग सम्पर्कमा आऊ ! तिमीले देशको झण्डाको अपमान गरेको फोटो मैले भन्दा पहिले नै धेरै नेपालीहरुले चित्त नबुझेरै नेटमा खातका खात अपलोड
गरेका छन् ! मेरो प्रोफाईलमा आएपछि भाईरल बन्यौ गाली खायौ यो फरक कुरा हो।तिमीले राम्रो काम गरेर मेरो फेसबुकमा स्थान पाएकी भए तिमीलाई कस्ले गाली दिन्थ्यो? हिमानी शाहलाई कस्ले गाली गर्छ? जोली अमात्यलाई कस्ले गाली गर्छ? रबिना देशराजलाई कस्ले गाली गर्छ? अनुराधा कोईरालालाई कस्ले गाली गर्छ?
शरिन ख्युङ्वा तामाङ, दिक्षा चापागाई, पुस्पा बस्नेत, जुनु पुनः मगर र इशा गुरुङहरुलाई कस्ले गाली गर्छ ? तिम्रा २ बोकाले तिमीलाई सहि छौ भन्दैमा तिमी सहि हुने हैनौ नि! आफै ख़राब कर्म गर्ने अनि महिलाले महिलाको सपोर्ट गरेन भनेर बकवास गर्ने ? अधिकाँस घर र समाज तोड्नेहरम महिलाहरु नै हुन्छन् यो कुरा तिमीजस्ता
गोबरगणेशले मलाई सिकाउनु पर्दैन । मैले तिमीलाई भनेको छु कि चाहे तिमी नाँगै हिँड, गाँजा चरेस भाङ धतुरो खाएर भएभरका तिम्रा बोकाहरुसँग नाच गाऊ जे गर हामीलाई सरोकार हुन्न तर रास्ट्रिय स्वाभिमानमा आँच आउने गरि तिम्रो छाडापनले देशको अस्मिता माथी प्रहार हुन्छ भने प्रतिकार मात्र हैन तिमीलाई चाह्यौं भने हामी
नेपालीहरुले केश हालेर अमेरिकाबाट मुन्ट्याउन पनि सक्छौं बुझ्यौ? अर्को कुरो तिमीले अमेरिकामा बसेर पसल चलाएको दुख गरेको तिम्रो भुँडी पाल्नलाई हो मेरोलागि हैन । दुख गरेको छु भनेर reverse psychology प्रयोग गरि सेन्टीमेन्ट बटुलेर अझ छाडा बन्न तिमीलाई एकईन्च छुट छैन । मैले त सभ्य भाषामै तिमीलाई
सम्झाएको छु, आक्रोसित नेपाली दाजुभाई हरुको लाईभ हेरेकी छौ तिमीले? हुनत त तिमीजस्ता बेसरम बेफिकर हरुलाई हामीले सभ्य भाषामा सम्झाएको पो पच्दैन त ! अरु छाडाकुरा त जे पनि पचाईदिन्छौ तिमी जो आफै अस्लिलता र उदण्डताको कारख़ाना जो छौ !
#नसुध्रिए_बहिस्कार_हुनेछौ! 👈 भिडियो हेर्न यहाँ किल्क गर्नुहोला